१७ वर्षपछिको भिडन्त : भारत या न्युजिल्यान्ड, कसले मार्ला बाजी ? - सबै खेल
क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट समाचार
१७ वर्षपछिको भिडन्त : भारत या न्युजिल्यान्ड, कसले मार्ला बाजी ?
२४ असार २०७६, मंगलवार ०१:०८ July 9, 20190Comments ICC World Cup 2019, India, New Zealand
मंगलबार म्यान्चेस्टरस्थित ओल्र्ड ट्राफोर्डमा हुने १२औं विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइलनमा भारत र न्युजिलयन्ड आपसमा भिडन्दै छन् । विश्वकपमा भारत र न्युजिल्यान्ड १७ वर्षपछि भिड्न लागेका हुन् । १७ वर्षपछिको यो भिडन्त निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी दुई टिम विश्वपकमा अन्तिम पटक सन् २००३ मा भिडेका थिए । सो खेल भारतले ७ विकेटले जितेको थियो । मंगलबार हुने यो भिडन्तलाई विराट कोहली र केल विलियम्सनबीचको भिडन्तका रुपमा पनि हेरिएको छ । विश्वकपको समेमिफाइलनमा यी दुई टिम पहिलो पटक भिड्न लागेका हुन् ।
कोहली र केन विश्वकपमा अहिलेसम्म आमनेसामने भएका छैनन् । तर, यी दुई युवा विश्वकपमा भने आपसमा भिडेका छन् । सन् २००८ को यू–१९ विश्वकपको सेमिफाइलनमा भारत र न्यूजिल्यान्ड आपसमा भिडेका थिए । खेलमा भारतले जितेको थियो ।
भारत र न्युजिल्यान्डबीचको पछिल्ला ७ भिडन्तमा भारत हावी छ । जसमा ६ खेल भारतले जित्दा १ खेल मात्र न्युजिल्यान्डले जितेको छ । सन् २०१९ को सुरुवातमै भारतले न्युजिल्यान्डविरुद्धको उसकै घरमा सिरिज ४–१ ले जितेको थियो । त्यसैले पनि कोहलीको टिम उत्साहित छ । सो सिरिजको कप्तानी रोहित शर्माले गरेका थिए । न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा कोहली र जस्प्रित बुमराहलाई आराम दिइएको थियो ।
तर, पछिल्ला एकदिवसीय सिरिजमा भारत हावी भए पनि विश्वकपमा भने न्युजिल्यान्ड हावी छ । विश्वकपमा
भारत र न्युजिल्यान्ड ७ पटक आपसमा भिडेका छन् । जसमध्ये ४ खेलमा न्युजिल्यान्डले जित्दा ३ खेलमा भारत विजयी भएको छ ।
विश्वकपमा यी दुई टिमबीचको भिडन्तमा ‘रन चेज’ गर्ने टिम बढी विजयी भएका छन् । ७ मध्ये ६ खेलमा रन पछ्याउने टिम विजयी भएका छन् । तर, जारी विश्वकपमा भने बढी खेल पहिले ब्याटिङ गर्ने टिममले जितेका छन् ।
विश्वकपमा यी दुई टिम पहिलो पटक सन् १९७५ मा भिडेका थिए । ओल्र्ड ट्राफोर्डमै भएको उक्त खेल न्युजिल्यान्डले ७ विकेटले जितेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि सन् १९७४ मा पुनः न्युजिल्यान्ड र भारत भिडेका थिए । सो खेल भारतले ८ विकेटले गुमाएको थियो ।
यसैगरी सन् १९८७ को विश्वकपमा भारत र न्युजिल्यान्ड २ पटक भिडेका थिए । बैंग्लोरमा भएको पहिलो खेल भारतले १६ रनले जितेको थियो भने नागपुरमा भएको दोस्रो खेल पनि भारतले ९ विकेटले जितेको थियो । यस्तै सन् १९९२ मा न्युजिल्यान्डमा भएको खेल न्युजिल्यान्डले जितेको थियो ।
सन् १९९९ मा सुपर सिक्समा भारत र न्युजिल्यान्ड पुनः भिडे । यो खेल न्युजिल्यान्डले ५ विकेटले जितेको थियो । यस्तै सन् २००३ मा भएको खेल भारतले ७ विकेटले जितेको थियो ।
← अर्जेन्टिनालाई नेसन्स लिग खेल्न होइन, हेर्न चाहिँ बोलाउन सकिन्छ : युइएफए
सागरको स्पिनमा हङकङ निरिह, नेपाल च्याम्पियन →
भैँसेपाटीमा बेसबलको मैदान
१ आश्विन २०७५, सोमबार १९:३८ 0
विश्कप छनोट : अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि नेपाली टिमको घोषणा
१४ आश्विन २०७६, मंगलवार २१:०३ 0